bye garaac Archives - Bitcoinxxo
Kabixida Ganacsiga Ganacsi ee Marit
Maaddaama cimiladu wanaagsan tahay, dhaqaalaha
Waxaan jeclaan lahaa inay wax yar ka fiicnaato.
Fayraska corona wali wuu sii kordhayaa.
Waxyaabo badan ayaa ka dhacaya adduunka oo dhan
Dhaqaalaha si dhakhso leh ayuu uga soo kabanayaa dhexda
Ma filayo in ay fududaan doonto.
Laakiin taa cakiskeeda, waxay leedahay jawi wanaagsan oo u gaar ah.
Waxa aan arkayay waxay ahayd Bitcoin.
Awoodda suuqa lacagta ayaa la filayaa
maadaama ay run noqoto
Shirkado badan iyo dad badan ayaa bilaaba maalgashiga
Xitaa maanta, suuqa ayaa sii kordhaya.
Dhanka kale, iyada oo loo marayo ganacsiga ganacsiga ‘Bybit margin’,
Dad badan ayaa lacag helaya.
Waxaan rajaynayaa in qofkasta oo akhriya maqaalkan uu isku dayi karo oo lacag samayn karo.
Maanta waxaan ka hadli doonnaa Ganacsiga Bybit Margin
Waxaan isku dayayaa inaan fududeeyo.
Ka Faa’iidaysiga Mustaqbalka
Guji tabta ganacsiga
Xullo doorbidkaaga doorbidista suuqgeynta ‘cryptocurrency’
Xulo habka dalabkaaga
Xulashada qaabka margin
Kabaalaynta isku dhufashada
Xullo miisaanka maalgashiga (10 %-100% )
Xulashada jihada maalgashiga (iib gaaban oo gaaban)
Bilow ganacsiga margin
Waxaad u adeegsan kartaa ganacsiga margin ee hawshan.
Hoosta, waxaan isku dayi doonaa inaan ku sharaxo wax yar oo faahfaahsan, laakiin si kooban.
Inta badan dadka isticmaala ganacsiga margin waxay adeegsanayaan leverage.
Haddii aadan rabin inaad isticmaasho leverage, waxaad isticmaali kartaa 1x.
Iska yaree khatarta adoo ka ganacsanaya heerka saxda ah
Sida loo sameeyo macaash xasiloon
Way fiicnaan laheyd inaad doorato jihada.
Dabcan, ganacsiga loo yaqaan ‘margin margin’ ma sahlana.
Hadaad sifiican u adeegsato
Marka la barbardhigo alaabada kale, waxaa jira suurta galnimo sare oo lagu kasban karo faa iido badan.
Ilaa 100x deyn oo aan lahayn wax shuruudo ah
Sababtoo ah waa suurtagal in la ganacsado, iyadoo la tixgelinayo halista
Haddii aad raadineyso faa’iido weyn, fadlan isku day hal jeer.
Kharashka Nolosha Bybit 20% Xiriirinta Lacag dhimista
Kuwa iska diiwaangeliya Bybit iyada oo loo marayo barnaamijka mobilada
Fadlan la soco in ay tahay inaad si toos ah u geliso macluumaadka si aad u hesho qiimo dhimista khidmadda.
Kuwa isdiiwaangeliyey iyagoon horey u galin la taliye
wada sheekeysi toos ah Aqoonsiga Gudbinta 18499 Codsiga Diiwaangelinta Hadaad sameyso
Waxaad heli doontaa faa’iidooyinka gudbinta.
Si loo dhigo lacagta aad rabto inaad maal gashato,
Ka dib markii lagu shubo is-weydaarsiga booska gudaha (Coinone, Bithumb, Upbit, iwm.),
Ka dib iibsiga cryptocurrency, waxaad u baahan tahay inaad ku wareejiso jeebka sarrifka Bybit.
Go’doon Margin Cross Margin
Marinka karantiil karantiil ayaa la heli karaa haddii dareeraha qasabka ah uu dhaco.
Ma jiro wax khasaaro ah oo ku saabsan hadhaagii haray ee dariiqa kaliya ee aan ku maalgashaday uu lumay.
Habka ka-gudubka waxaa ka mid ah isu-dheellitirka, ma aha inta la soo geliyay.
Adiga oo haysta dammaanad, waad ballaarin kartaa farqiga u dhexeeya qiimaha gelitaanka iyo bixitaanka.
Waxay yareynaysaa halista dheecaanka qasabka ah, laakiin haddii ay dhacdo in dareere lagaliyo, waxaad waayi doontaa qaddarka dhan
Waxaan kugula talineynaa go’doominta go’doonka bilowga ah.
Isku dhufashada ka faa’iideysiga ee loo dejin karo lacag kasta ayaa ka duwan, laakiin waxay noqon kartaa ilaa 100 jeer.
Caadi ahaan 2-10x leverage ayaa la isticmaalaa, iyo 2-3x haddii abuurku weyn yahay.
Waxaa lagugula talinayaa inaadan isticmaalin weyneynta sare ee 10 jeer ama ka badan.
Bybit sarrifka ayaa leh khidmad diidmo ah xadka xaddidan.
Khidmadda diidmada ah waxay ka dhigan tahay in khidmaddii la beddelay.
0.075% amarrada suuqa, -0.025% amarrada xaddidan
Bybit way ka bixi kartaa 3 jeer maalintii 01:00, 09:00, iyo 17:00.
Waa inaad buuxisaa codsiga ka noqoshada 30 daqiiqo kahor.
Si loo ilaaliyo server xasilloon,
Waxay umuuqataa in waqtiga loo qabtay.
Kahor intaadan bilaabin Ganacsiga Bybit Margin
Waxaan si kooban u sharaxay waxyaabaha wanaagsan ee la ogaan karo.
Haddii aad rabto inaad xirto booskaaga ka dib markaad fuliso ganacsiga ganacsiga ‘Bybit margin’
Kaliya dhagsii qiimaha suuqa ama badhanka xadka midigta.
Faa’iidada kale ee ganacsiga Bybit margin waa
Isla markiiba joojinta luminta Waxaa jira qayb aad sameyn karto
Waxa kale oo fiicnaan lahayd in laga ogaado joojinta luminta.
Waxaan rajeynayaa inaad halganto.
Categories bye garaac
20% laga dhimayo Xaqiijinta Khidmadda ByBit
Waan ku faraxsanahay inaan kula kulmo bulsho isbeddelaysa si dhakhso leh
Noloshu ma sahlanaan karto.
Qeyb kasta sida dhaqaalaha, sayniska, bulshada, iwm, si deg deg ah
Way is beddeleysaa.
Iyaga dhexdooda, qaybta dhaqaalaha ayaa si isdaba joog ah isu beddeleysa.
Waxaan u maleynayaa inaad aadayso
Dad badan ayaa maalgashada iyo suuqa Bitcoin
Markaan sii weynaano, waxyaabo badan ayaa isbedela.
Dad aad iyo aad u tiro badan ayaa xiiseynaya shilimaadka
Markaad maal gashato wax badan, miisaanka lama qiyaasi karo
Aad buu u weynaaday oo aanan kari karin.
Dad badan ayaa durba sameynaya shilimaad.
Waad arki kartaa.
In kasta oo ay jiraan isweydaarsiyo badan oo qadaadiic ah, hubi dhimista khidmadda Bybit
Iskuday oo waxaad kaheli doontaa runtii waxtar.
Markaad iska diiwaangeliso Bybit, heerka khidmadda lama soo bandhigayo.
Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay inaad si dhab ah u ganacsato si aad u ogaato qiimo dhimista khidmadda.
Xitaa haddii ay tahay wax yar oo dhib iyo raaxo la’aan ah
Kadib markaad saxiixdo, iskuday inaad ku ganacsato qaddar yar
Hubso inaad isku daydo sicir-dhimista khidmadda!
Ka dib markaad sameysay macaamilkan dhabta ah
Waxaad ka hubin kartaa sicirka komishanka adoo tagaya taariikhda wax kala iibsiga.
Waxaad ka fikiri kartaa boqolkiiba inta komishanku yahay komishanka aad bixiso.
khidmadda aniga oo kale ah 0,0006 Hadday tiraahdo
Waxaad helaysaa qiimo dhimista 20% saxda ah!
Haddii ay u soo baxdo sidii 0,00063750, waa qiimo dhimis 15% ah.
Haddii ay tiraahdo 0.007, markaa ma heleysid wax qiimo dhimis guddi ah gabi ahaanba.
15% dhimis ayaa lagu sheegay inay tahay sicir dhimista ugu badan meelaha kale.
Tani run maahan oo sicir-dhimista 20% waa sicir-dhimista ugu badan.
15% qiimo dhimis ku saabsan gudbinta saamileyaasha jira,
Kuwa saamaynta ku leh, gudbinta 20% waxaa la heli karaa oo keliya haddii shuruudaha qaarkood la buuxiyo.
Waan bixin karnaa.
Haddii aad saxiixdo, waxaad iska diiwaan gelin kartaa tixraac qiimo dhimis ah 20%
Wax badan ma kaa caawin doontaa ganacsiga?
Hubso inaad iska hubiso oo aad hesho sicir-dhimista ugu fiican
Way ku caawinaysaa isticmaalkeeda.
Kuwa iska diiwaangeliya barnaamijka mobilada
Summada gudbinta B5QJY ku
Waa inaad gacanta ku gelisaa si aad u hesho sicir-dhimista khidmadda.
Kuwa isdiiwaangaliyay iyagoon galin lambar tixraac
wada sheekeysi toos ah Gudbinta Aqoonsiga Codsiga diiwaangelinta 18499 Hadaad sameyso
Waxaad heli kartaa dheefaha gudbinta!
Muhiimadda qiimo dhimista
Xitaa haddii khidmaddu badan tahay, waxaan doonayaa inaan ogaado inta ay soo baxeyso
Waxaa jira dad aad u tiro badan oo iska indhatiraya waxtarka iyo ka ganacsiga.
Xaqiiqdii, sidaas oo kale ayaan ahaa.
Si kastaba ha noqotee, haddii mustaqbalka laga faa’iidaysto ganacsiga,
Khidmadaha waxay sidoo kale kuxirantahay cabirka booska.
Waad ka fikiri kartaa iyada oo ka faa’iideysanaya ujrada inta ugu badan ee saamiga deynta.
maxaa yeelay waa khidmad macaamil ganacsi
Khidmadaha waxaa laga bixiyaa iibsiga iyo iibinta labadaba.
Isticmaalka kaliya 10x leverage ayaa dhali doonta 0.007 * 2 = 0.14%.
Isugeynta sidan oo kale waxay sameyn doontaa qadar aad u badan.
Haddii ay dhacdo dulqaad badan iyo adeegsi fara badan
Qiimaha lagu keydin karo guddiyada qiimo dhimista waxay u dhexeeyaan tobanaan kun ilaa toban kun oo doolar.
Markuu sare u kaco mugga aad ka ganacsaneyso, ayaa ka sii qiimo badan qiimo dhimista khidmadu.
Marka, hubi inaad hubiso dhimista khidmadda Bybit.
Kuwii u saxeexay qiime jaban
Waxaan kugula talineynaa in dib loo diiwaan geliyo.
Iskuday oo ku raaxayso sicir-dhimista komishanka
Waxaa jira dad aad u fara badan oo dib isugu soo biiraya.
Haddii aad bilowdo inaad ka faa’iideysato bilowga
Waxay kaa caawin doontaa inaad wax yar maal gasho.
In kasta oo suuqa sarifka la filayo inuu koboco mustaqbalka,
goorta la maalgashanayo
Fiiri dhimista khidmadda Bybit
Fadlan iskuday isticmaalkeeda.
Kharashka Bixinta Bixinta
Waan ku faraxsanahay inaan kula kulmo maxaa yeelay xagaaga kulul ayaa soo dhowaanaya
Waa maalin kulul waxaanan sii doonayaa inaan aado xeebta.
Fasax xagaaga oo xiiso leh
Waxaa jira dad ku adag shaqada maalgashiga.
Maanta waxaan ka hadlaynaa khidmadda leverage lebit.
Muuqaal deg deg ah oo ku saabsan sida loo isticmaalo
Waxaan sidoo kale rabnaa inaan ka hadalno.
ilaa 100 jeer
Kaabashadan xoogaa-yare ah ayaa ah
Waxay ka dhigan tahay inaad amaahan karto lacag sida tiro badan oo aad dejiso oo aad macaamil samayn karto.
Bixin ku shubashada waxaa la heli karaa illaa 100x.
Ganacsiga booska jira ayaa macaash ku kasbanaya faa’iidooyinka raasumaalka.
Iibso 100 ku guuleystay qadaadiic 100 maalgashi lagu guuleystay
Qiimaha qadaadiicda ayaa kor u kacay 10% ilaa 110 guuleystey.
Taasi waa 10% faa’iidada, markaa waxaad kasban doontaa 10 guuleystey.
Tani waa waxa dhacaya markaad isticmaasho leverage.
Isticmaalidda 10x leverage oo leh 100 maalgashi lagu guuleystay
Waxaad iibsan kartaa 1000 qadaadiic ah oo ku guuleystay qadaadiic ah.
Haddii ay kor u kacdo 10% markaa
Waxsoosaarka ayaa noqon doona 100%.
Way fududahay in la fahmo haddii aad uga fikirto sidii deyn guri.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad isticmaasho leverage lebit,
Khatarta daadinta qasabka ah Waa inaad ogaataa oo aad adeegsataa.
Saamiga ku habboon ee leverage waa 2-10 jeer Waxaa loo yaqaan shahaado.
Waxay u muuqataa in inta badan saamiyada sare ee 10 jeer ama ka badan aan la isticmaalin.
Markaad isticmaasho adeegsigaan, ujrooyinka ayaa si isku mid ah muhiim u ah.
Waxaan sidoo kale bixin doonaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan khidmadaha.
0.075% amarrada suuqa
-0.025% amar xaddidan
Way ku xun tahay qiimaha loogu talagalay.
Markaad macaamil samaynayso, lacag baa lagugu soo celinayaa.
Markaad ku ganacsato qiimaha suuqa, waa inaad bixisaa lacag.
waa in la dhaho
Maxaa Khidmadaha Loogu Muhiimsan yahay
Tani waa sababta oo ah haddii aad isticmaasho leverage, khidmadahaagu sidoo kale way kici doonaan.
Tusaale ahaan, haddii aad isticmaashay leverage 5x,
Sidoo kale waa inaad bixisaa 5 jeer khidmadda.
Tani waa sababta qiimo dhimista ay muhiim u tahay.
Xaqiiqdii, wax ka ogaanshaha arrintan waxay kaa badbaadin kartaa lacag badan.
awoodi lahaa inuu isticmaalo
Kuwa aan aqoon u lahayn tan
Waan ka xunnahay inaad isticmaaleyso adigoon helin qiimo dhimis.
Marka, macluumaadka sida khidmadda lacag bixinta ee ‘Bybit leverage fee’
Waxaa lagugula talinayaa inaad ogaato kahor intaadan bilaabin ganacsiga.
Nolosha Bybit 20% Qiimaha Qiimaha Qiimaha
Koodhka gudbinta biilka B5QJY
Waa inaad gacanta ku gelisaa B5QJY
Fadlan la soco inaad xaq u yeelan karto qiime dhimis.
At Bybit Exchange, markaad saxiixdo kadib markaad gasho talobixiyaha
Keydso ilaa 20% Waxaad heli kartaa gargaarka nolosha oo dhan.
Waxaa jira xiriiro badan oo qiimo dhimis ah 15%, laakiin 20% xiriiriye dhimis ayaa ugu weyn.
Xiriiro kasta oo qiimo dhimis ah ayaa loo arkaa inay yihiin been abuur.
Xidhiidhka qiimo dhimista ee 20% waa xaalad gaar ah oo ka mid ah xeerarka saamaynta.
Sababtoo ah waa koodh la bixin karo oo keliya markii lagu qanco
Saxiix lambarka kore si aad ugu raaxeysato faa’iidooyin badan.
Sidoo kale, kuwa isdiiwaangaliyay iyagoon summad gudbin gudbin
Haddii aad codsato diiwaangelin aqoonsi tixraac ah 18499 iyada oo loo marayo Live Chat,
Faa’iidooyin la mid ah kuwa kor ku xusan!
Waxaan kugula talineynaa dib-u-qorid kuwa iska diiwaangaliyay dhibcaha 10 %~15%
Habka kabaal marinta Bybit, qiimo dhimista, iwm.
ku saabsan baahiyaha aasaasiga ah
Raadi oo si sax ah u bilow
Waxay kaa caawin doontaa inaad sameyso maalgashi guuleysta.
Qaybta ku saabsan khidmadda amaahda Bybit
maxaa yeelay waa qayb muhiim ah
Waxaad u baahan tahay inaad fahamto fikradda si sax ah.
Ma jiraan wax khasaaro ah haddii aadan ogeyn.
Xitaa haddii ay jiraan qaybo murugsan marka laga ganacsanayo Bitcoin
Waxaan rajaynayaa inaad fahantay oo aad bilawday.
Sida loogu badalo bybit-ka KRW
Dad badan ayaa raba inay isu diyaariyaan mustaqbalka iyo hawlgabnimada.
haysashada akoon keyd, keyd ama maalgashi
Hadda waxaa la joogaa xilligii la soo ururin lahaa hantidan oo loo diyaar garoobi lahaa mustaqbalka.
Waan ogahay in maalgashigu runtii muhiim yahay,
Waxay umuuqataa in qof kastaa uu kusocdo jawi maalgashi firfircoon.
Haddii kaydku uu ahaan jiray mid aad u kulul, dhawaan
suuqa lacagta loo yaqaan ‘bitcoin’
Dareen-celinta ayaa aad u kulul.
Maaddaama dad badani ay xiiseynayaan adeegsiga mustaqbalka,
Ku saabsan sida loo muujiyo by-bit guuleystay
Maadaama aad xiiseyneyso, waxaan jeclaan lahaa inaan ku tuso sida loo muujiyo guusha Kuuriya.
Ku fududaan websaydhka ama barnaamijka
Waan xallin karaa.
Kuwa aan wali isticmaalin, u beddel muuqaalka lacagta asalka ah.
Waxaan u maleynayaa inaad u fududaan doonto inaad isticmaasho!
Isbedelada sicirka sarrifka kala duwan ayaa suurtagal ku ah sarrifka Bybit.
Laakiin, haddii aadan dejin karin bandhigga waxoogaa lagu guuleystay,
Waxay noqon kartaa fikrad fiican inaad tixraacdo oo aad bedesho.
Liiska, tag goobaha, iyo qeybta guud, waxaad tagtaa Lacagta u dhiganta.
Waad dejin kartaa sicirka sarrifka si aad ugu muujiso KRW gudaha KRW.
Kuwa ku qanacsan lacag aan ahayn Kuuriya ayaa guuleystay
U beddel lacagta u dhiganta lacagta aad dooratay.
runtii waa wax fudud
Dad badan wax badan kama oga Bitcoin.
Waxaad heli doontaa qaybo kugu filan.
Sababtaas awgeed, adeegsiga isweydaarsiga Bybit sidoo kale waa
Waxaa jira dad aadan aqoon.
Dejinta fudud sida muuqaalka loo yaqaan ‘bybit bandhigay’
Ha u fikirin si adag maxaa yeelay waa macquul in la xaliyo
Waxay u qalantaa maalgashi.
Xaqiiqdii, Kuuriya, wax jawaab celin ah kama bixin Bitcoin iyo cryptocurrency.
Anigu waxaan ku jiray dhinaca qabow, laakiin waxaan ku dhex maraa korona
Waxyaabo badan ayaa umuuqda inay isbadaleen.
Iyo markii suuqa lacagta lagu kala iibsadaa si weyn kor ugu kacay,
Saameynta ayaa sidoo kale sii kordheysa.
Shirkado waaweyn ayaa ku taxan lacagta
Isbedelo waa weyn ayaa socda maalmahan.
Intaa markaan ku jiray, markaan ka war helay ByBit,
Dadka qaarkiis waxay bilaabaan maalgashiga tan.
Intaa waxaa sii dheer, waxaad ka heli kartaa qiimo dhimis dhan 20% khidmadaha komishanka ee is dhaafsiga Bybit inta noloshaada ka hartay.
Waqtiga fog, waxaad arki kartaa faa’iidooyin waaweyn.
Dabcan, haddii aad iska qorto sicir-dhimis hooseeya %-10%
Waxaa la dhihi karaa waxaa jira khasaaro yar.
Haddii aadan wali galin ama aadan isdiiwaangalin,
Waad arki kartaa faa’iidooyinka, markaa fadlan ka faa’iideyso faa’iidooyinka khidmadda.
Khidmadda ByBit 20% Xiriirinta Qiime-dhimista Nolosha
Kuwa iska diiwaangeliya barnaamijka mobilada B5QJY waa in gacanta la geliyaa.
Kuwii isdiiwaangaliyay oo adeegsaday iyagoon galin la taliye
20% qiimo dhimis ku saabsan khidmadaha nolosha
Waxaan rajeynayaa inaad ka heshay oo aad ka faa’iideysan karto!
Maanta, waxaan ku tusay sida loo muujiyo Bybit Won.
Si loo fududeeyo maalgelinta bitcoin berri
Waxaan soo dhejin doonnaa macluumaad waxtar leh.
20% qiimo dhimis ah khidmadaha gudbinta
Dhagsii sawirka si aad ugu tagto daaqada isdiiwaangelinta saxiixa
Gudbinta Bixinta B5QJY
Suuqa beenta suuqa hadda socda ayaa in muddo ah socday.
Sidaas darteed, waxaa jira dad badan oo lumay.
Laakiin maalgashadayaasha caqliga badan ayaa ka ganacsanaya mustaqbalka.
Waxaad kasameyneysaa faa iido weyn.
In macaash laga sameeyo xitaa suuqa hoos u dhaca
Waxaa jira dad badan oo ku ganacsada mustaqbal mustaqbal isdhaafsi.
Marka lagu daro sharaxaadda macaamilkan ganacsi ee mustaqbalka
Waxaan jeclaan lahaa in aan la wadaago koodhka gudbinta biilka.
Xeerarka gudbinta Bybit badanaa waa laga dhimay 15%.
Wax badan ayaan arkaa.
Si kastaba ha noqotee 20% koodh dhimis waa lambarka ugu yar ee sicir-dhimista.
Ka mid ah xeerarka dhimista wax-dhimista ee hadda jira (15%)
Waa inaad buuxisaa shuruudaha qaarkood si aad u awoodo inaad bixiso qiimo dhimis 20% ah.
Macaamiisha ayaa iska diiwaan gelin kara 20% lambar qiimo dhimis ah
Taasi waxay noqon laheyd faa iido badan.
Ma jiro sicir-dhimis ka badan tan!
Faa’iidooyinka xitaa suuqa hoose
Mustaqbalka Ka Faa’iidaysiga Ganacsiga
Sida muuqata, 2017-2018, Bitcoin’s
Maxaa yeelay waxaa jira dad badan oo soo maray
Waad ogtahay macluumaad badan oo ku saabsan, waxaadna sameyn kartaa ganacsi ganacsi sidoo kale.
Waxay kaloo sameeyaan ganacsi badan.
Mustaqbalka ganacsiga waxaa loola jeedaa in lagu qiimeeyo qiimo cayiman mustaqbalka.
Waa macaamil ganacsi oo lagu heshiiyey xilligan la joogo, waana nooc ka mid ah macaamil ganacsiyeedka wax soo saarka.
Markaad ka ganacsaneyso mustaqbalka ByBit, haddii aad ku iibiso Bitcoin $ 40,000
Hadaad markale ku iibsato $ 35,000
Waxaad ku arki doontaa macaash $ 5000 ee dhacay.
Marka laga hadlayo ganacsiga mustaqbalka, waxaad arki kartaa maalgashiga jiho kasta oo aad rabto inaad kacdo ama dhacdo.
Tani waxay faa’iido u leedahay suuq hoos u dhaca maanta oo kale.
Waad ku badin kartaa faa’iidooyinkaaga adoo adeegsanaya,
Waxay faa’iido u leedahay helitaanka dakhliga dulsaarka iyada oo loo marayo maalgashiga kharashyada maalgelinta.
Marka la eego sarrifka mustaqbalka lacagta birta ah, waxaa loo adeegsadaa isweydaarsiga dibedda.
Dhexdooda, Bybit waa mid ka mid ah is-weydaarsiga adduunka oo dhan laga isticmaalo.
Marka laga hadlayo Bybit, inkasta oo ay tahay isweydaarsi dibedda ah, waxay taageertaa Kuuriya.
Waxaa loo isticmaali karaa si la mid ah isweydaarsiga Kuuriya.
Sababtoo ah Bybit kaliya waxay taageertaa ganacsiga mustaqbalka.
Ma jiraan wax dhibaato ah sida furitaanka serverka iyo dib u dhaca, waadna u adeegsan kartaa si deggan.
Sidoo kale, maxaa yeelay waxaa jira dhacdooyin kale oo badan
Ganacsato badan oo mustaqbalka ah waxay adeegsadaan Bybit.
Waa inaad iska diiwaangelisaa xubin ahaan si aad u isticmaasho Bybit.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad isticmaasho koodhka gudbinta ee Bixiyaha ama isku xirka martiqaad,
Waxaad xaq u yeelan kartaa qiime dhimis.
Bybit dhimis ugu badnaan
Xiriirinta gudbinta Bybit: https://www.bybit.com/register?affiliate_id=18499&language=en-US&group_id=0&group_type=1
B5QJY Waa inaad gacanta ku gasho
Kuwa isdiiwaangaliyay iyagoon gudbin gudbin
Marka laga hadlayo Bybit, looma baahna in la maro xaqiijin shaqsiyeed markii la qorayo xubinnimada.
Waxaad iska diiwaangelin kartaa xubin ahaan email keliya
Markaad sameyneyso macaamil macaamil ganacsi kadib markaad xubin iska diiwaangeliso, waa inaad bixisaa khidmadda macaamil ganacsi.
Si loo kaydiyo khidmadda macaamil ganacsi
Xitaa haddii ay dhib tahay, waad isticmaali kartaa koodhka gudbinta biilka
Hubso inaad ka faa’iideysato dhimista khidmadda.
Dabeecadda ganacsiga mustaqbalka, waxaa jira macaamillo badan oo hal-toogasho ah, iyo haddii aad isticmaasho ka faa’iideysiga,
Maaddaama saamiga leverage uu kordhayo, khidmaddu sidoo kale way kordheysaa.
Tan darteed, khidmadaha macaamilku mar dambe lama dayaci karo.
Doorashada is-dhaafsiga mustaqbalka waa mid aad muhiim u ah marka la iibinayo mustaqbalka cryptocurrency.
Isweydaarsiyada yaryar waxay soo jiitaan maalgashadayaasha iyagoo u maraya dhacdooyin iyo sicir-dhimis hooseeya.
Waxaa jira khiyaanooyin badan, ee ka taxaddar.
Ka dib markii uu munaasabad la qabtay maal-gashadeyaashii dhowaa
Waxaa dhacday dhacdo lacagtii la xaday.
Taasi waa sababta ay muhiim u tahay in la isticmaalo isweydaarsi ballaaran oo aamin ah sida Bybit.
Mar aan fogayn, markii kaydku ka soo daadanayay godka,
Wax kala iibsiga ayaa si ku meel gaadh ah loo joojiyay dad badana waa laga nadiifiyey.
Waxaan la kulmay khasaaro aad u weyn.
Si kastaba ha noqotee, Bybit wuxuu dhisayaa shabakad weyn oo server ah oo ka duwan isweydaarsiyada kale.
Waad ka bixi kartaa hoos-u-dhaca deggenaanshaha adiga oo aamin ah.
Halkani waa halka shabakadda badbaadada adeegaha lagu sugo.
Dad badan oo caan ah ayaa sidoo kale adeegsanaya Bybeat.
Waad ku badin kartaa macaashkaaga adoo adeegsanaya Xeerka Gudbinta Biilka.
Ha iloobin nambarka gudbinta markaad iska diiwaangelineyso Bybit!
Bybit-ka guddiga gudbinta lambarka gudbinta lambarka 20% lambarka marti-qaadista saxeex-dhimista
Qiimo Dhimista Gudbinta Lacagta ByBit 20% Code Martiqaad
Tag xiriirka si aad uqorto 20% qiimo dhimis
Xeerka Gudbinta Bixinta B5QJY
Nolosha 20% lambarka sicir-dhimista ee khidmadaha wareegga (tani waa nambarka ugu badan ee dhimista)
Markaad iska diiwaangeliso kumbuyuutarka, iskuxirka si otomaatig ah ayaa loo geliyaa, markaa uma baahnid inaad soo geliso macluumaad dheeraad ah.
Markii aad iska diiwaangeliso barnaamijka, xiriiriyaha si otomaatig ah looma gelinayo, markaa waa inaad gashaa lambarka gudbinta ee B5QJY si aad uga hesho qiimo dhimis dhan 20% oo ah inta laga nool yahay.
Binance iyo Bybit waxay u tartamayaan boosaska 1aad iyo 2aad ee isdhaafsiga mustaqbalka.
Marka laga hadlayo Bybit, si ka duwan isweydaarsiyada kale, way fiicantahay in la isticmaalo maxaa yeelay waxay had iyo jeer martigelisaa dhacdooyinka gardarada ah marka lagu daro dhacdooyinka aasaasiga ah.
Maaddaama qiimaha Bitcoin uu kor u kacayo maalmahan, dad badan ayaa macaash ku kasbanaya iyada oo loo marayo ganacsiga barta iyo hal hits.
Maaddaama xiisaha Bitcoin uu kordhay, dad badan ayaa sidoo kale xiiseynaya ka ganacsiga mustaqbalka.
Ganacsiga mustaqbalka waa qaab dhismeed kaas oo macaashka lagu helo iyadoo la saadaalinayo kororka iyo hoos u dhaca iibinta gaagaaban (gaagaaban) iyo gadasho gaaban (dheer).
Si kale haddii loo dhigo, si ballaaran ayaa loo isticmaali karaa maxaa yeelay waa hab ganacsi oo macaash samayn kara xitaa haddii ay dhacdo hoos u dhac. Waxay sidoo kale awood u siisaa soo-celinta sare markaad isticmaaleysid leverage.
Intooda badan kuwa balaayiin doolar ku sameeyay Bitcoin waxaa loo tixgelin karaa inay ku heleen ganacsiga mustaqbalka (leverage).
Markaad ku ganacsaneyso deyn, heerka komishankaagu sidoo kale wuu kordhayaa, markaa dhimista guddigaaga ayaa runtii muhiim ah!
Xiriirinta gudbinta / Guji si aad u tagto
* Markii aad iska diiwaangelineyso barnaamijka, fadlan gali B5QJY oo iska qor!
Isla sidaas ayaa lagu dabaqayaa ganacsiga barta.
Mustaqbalka ganacsiga, way fiicnaan laheyd in lagu bilaabo lacag yar, sax?
Gaar ahaan, kuwa hela macaashka sare
Waxaa la sheegay inay badbaadinayso tobanaan kun oo doolar oo khidmad ah sanadkiiba.
Hubso inaad iska diiwaangeliso qiimo dhimis 20% ah oo leh lambarka gudbinta!
Dhacdada liistada 🔥BYBIT Dogecoin (DOGE)
🐶 Sida looga qaybgalo
ee xarunta gargaarka DOGEWOW “gala koodh
Per Muddada Dhacdada
6/2 7pm – 6/11 6:59 pm (Kuuriya)
Dhacdada # 1 (7500 oo qof oo ah dadka soo-horreeya, marka hore loo adeego)
Lacagta ugu yar ee 500 USDT> 10 USDT gunno
* Ka dib markaad dhigato qadaadiic kale, waa la aqbalaa xitaa haddii aad ugu beddesho USDT
Dhacdada # 2 (7500 oo qof oo ah dadka soo-horreeya, marka hore loo adeego)
Ku guuleysiga ugu yaraan 2,000 USD mugga ganacsiga ee qandaraaska joogtada ah ee DOGE / USDT> 10 USDT gunno
VentEvent # 3 (aasaaska-soo-hore-loo adeegay)
Hadaad kugula talinaysid Bixi asxaabtaada, iyo asxaabta lagugula taliyay inay gaaraan labada shuruudood ee kore, waxaad heli doontaa gunno dhan 15 USDT midkiiba (illaa 5 qof)
* Akoonnada hoosaadyadu kama qayb geli karaan dhacdadan.
* Isdhaafsiga / ka noqoshada muddada dhacdada waxay saameyn ku yeelan kartaa qaddarka dhigaalka.
20% sicir-dhimis ku saabsan nidaamka wareegga nolosha Gudbinta lambarka
Markaad iska diiwaangelineyso mobilka / barnaamijka, hubi inaad si toos ah ugu soo gasho lambarka tixraaca B5QJY si aad ugu biirto.
Dhagsii sawirka si aad udhacdo
Xaaladda PC / Web, waxaad iska diiwaan gelin kartaa xiriirka hoose.
Haddii aad iska diiwaangeliso moobil / app, xiriiriye si otomaatig ah looma gelin.
Waa inaad si toos ah u gashaa lambarka gudbinta ee B5QJY si aad u hesho nolol dhimis dhan 20%.
Bybit, sida Binance, waxay bixisaa ganacsi joogto ah USDT / Bitcoin mustaqbalka.
Bybit wuu ka duwan yahay aaladaha kale sida fadliga iyo dhacdooyinka gardarada ah.
Waa madal ku sii kordheysa heer cabsi leh.
Waxaan u maleynayaa inay tahay isweydaarsi ku habboon kuwa dareemaya in ganacsiga kaligiis uusan ku filneyn.
Saxiix Bybit 20% nambarka sicir-dhimista guddiga
Hel qiimo dhimis!
Dhawaan, maadaama xiisaha Bitcoin uu kordhay, waxaa jiray xeerar badan oo been abuur ah.
Xusuusnow in sicir-dhimista 20% ay tahay tan ugu sarreysa, iyo gudbinta kore ee been-abuurka ah.
* Waa inaad saxiixdo adoo adeegsanaya xiriirka hoose si aad u hesho sicir-dhimista.
1. Saxiix adigoo adeegsanaya xiriiriyeha hoose
2. Saxeex adigoo galaya lambarka
Markaad la saxiixaneyso barnaamijka, waa inaad gacanta ku qortaa lambarka.
Hadaad isqorto adoo adeegsanaya iskuxiraha ama koodhka kore
Waxaad si otomaatig ah u heli doontaa qiimo dhimis 20% ah.
Waxaan u maleynayaa inaad ogtahay in sicir-dhimista guddiga ay aad muhiim ugu tahay ganacsiga mustaqbalka.
Adeegsiga isdhaafsiga gudaha
Bybit, sarrifka dibedda ee leh mug ganacsi sare
Waxaad rabtaa inaad isticmaasho ganacsiga mustaqbalka.
20% dhimis guddi ah oo ku saabsan macaamilada goobta
Uma muuqan karto wax weyn
Ganacsiga mustaqbalka, qiima dhimistaan 20% ah waxay noqoneysaa mid aad muhiim u ah.
Khidmadaha ayaa sidoo kale kor u kaca sababtoo ah ka faa’iideysiga.
Dabeecadda ganacsiga mustaqbalka, qaddarro badan iyo kuwa badan baa la kala iibsanayaa.
Khidmadaha wax kala iibsiga, dabcan, waxaa lagu bixiyaa macaamil kasta.
Haddii aad sii wadato ganacsiga adiga oo aan lagaa dhimin khidmadda,
Bixinta khidmadaha ayaa noqon doona mid aad u weyn.
Intaas waxaa sii dheer, dabeecadda ganacsiga mustaqbalka, waxaa jira hits badan oo hal mar ah, sidaas darteed waxaa jira macaamilo badan.
Natiija ahaan, khidmadaha macaamil ganacsi ayaa si lama huraan ah u noqonaya kuwo culays badan leh.
Hubso inaad isqorto qiime dhimista!
xubin cusub Faa’iidooyinka
1. Macaashka deebaajiga ee ugu horreeya + $ 50 (kuuboon)
– Lacagta ugu horeysa ee BTC≥ 0.1 / ETH≥ 3 / EOS≥ 1,080 / XRP≥ 8,800 / USDT≥ 4,000
– Haddii dhigaalka ugu horreeya 48 saacadood gudahood uu yahay 0.1 BTC ama ka badan, $ 50 waa bilaash
– Haddii dhigaalka ugu horreeya 48 saacadood ka dib uu yahay 0.1 BTC ama ka badan, $ 10 bilaash ah
2. Debaajiga BTC + $ 5 (Hadiyad)
– Debaajiga BTC
3. Beesha + $ 5 (Coupon)
– Raac Bybit rasmiga ah SNS
Dhammaan lambarrada gudbinta ee hoose waxay ku xiran yihiin heerarka ugu sarreeya ee guddiga.
Khidmadda Nolol Gudbiyeha Noloshiisa 20% Xeerka Gudbinta
Khidmadda Gudbinta Bixinta 20% Xeerka Gudbinta
Haddii aad iska diiwaangeliso Bybit iyada oo loo marayo barnaamijka moobiilka, isticmaal lambarka gudbinta B5QJY.
Bitget Mobile 50% Xiriirinta Xeerka Xawilaadda
BitGet PC / Web 50% Xiriirinta Koodhka Xiriirka
Fadlan ogow in BitGet ay hayso dhacdo abaalmarin ah hadda.
Categories bye garaac, Gudbinta Binance, Seeraar
Isweydaarsiga Bybit waa isweydaarsiga mustaqbalka si dhakhso leh u koraya.
Waxay sidoo kale caan ku yihiin inay leeyihiin dhacdooyin badan oo dagaal badan!
Waxaa la sheegay in kaqeybgalka dhacdada kaliya ay faa iido badan ka heli karto.
Kuwa aan haysan ganacsi bar ku filan
Waxaan kugula talineynaa Bybit Exchange.
Bybit Exchange waa isweydaarsiga suuqyada ‘cryptocurrency margin’ / mustaqbalka.
Iibsasho gaaban, iibin gaaban,
Waxaa lagu sameyn karaa leverage, sidaa darteed waxay kufiican tahay soo noqoshada sare.
Laga bilaabo 2021, illaa 3 sano
Waligeed ma dhicin hal kiis oo jabsiga ah.
Maadaama ay tahay lacag dalwad ah, amniga waa in la damaanad qaadaa si aad ugu kalsoonaan karto.
Sidoo kale, faa’iidada ugu weyni waa
Waa UI oo u fudud isticmaalayaasha inay adeegsadaan.
Abka sidoo kale waa fududahay in la isticmaalo, sidaa darteed waxaa sidoo kale loogu isticmaali karaa mobilada sidoo kale.
Waad u adeegsan kartaa adigoon wax dhib ah qabin.
Mid. tag bogga hore
Booqo websaydhka oo iska diiwaangeli xubin ahaan.
Laga soo bilaabo shaashadda hoose, isticmaal habka ugu habboon ee emaylka ama taleefanka gacanta
Fadlan sii wad diiwaangelinta xubinnimada.
Saxiixida xubinimada waa mid aad u fudud.
Markaad isqorto, waxaad heli kartaa qiimo dhimis 20% ah oo ku saabsan guddiyada adoo galaya gudbinta.
Mar dambe kuma dari kartid, markaa hubi inaad saxiixdo markii ugu horreysay.
Waad iska diiwaan gelin kartaa adoo galaya talladaada.
Fadlan ogow in sicir-dhimista 20% ay tahay heerka ugu sarreeya.
2. Tallaabada xaqiijinta
Habka aqoonsigu wuu ku kala duwan yahay iyadoo ku xiran habka diiwaangelinta xubinnimada ee kor lagu soo xulay.
Ka dib markaad geliso emaylkaaga iyo lambarkaaga sirta ah,
Kadib markaad hubiso lambarka xaqiijinta ee sanduuqaaga boostada
Fadlan gali lambarka xaqiijinta.
Saxiix xubinimada taleefanka gacanta
Ka dib markaad geliso lambarka taleefankaaga gacanta iyo lambarkaaga sirta ah,
Hubi farriinta qoraalka oo geli lambarka xaqiijinta.
Waxaad arki doontaa shaashad sidan oo kale ah
Kaliya ku dul boodbooda xujada.
Waad ka fikiri kartaa inay tahay tallaabo looga hortagayo helitaanka aaladda robot-ka.
3. Dejinta Amniga Google Authenticator
Amniga laba heer.
Waad dejin kartaa Google Authenticator si aad u ilaaliso.
Marka lagu daro Bybit, waxaa sidoo kale laga heli karaa isweydaarsiga Binance.
Waad dejin kartaa isla
Maaddaama aysan tani ahayn tallaabo loo baahan yahay, waxaan ku sharxi doonaa qoraal dheeri ah goor dambe.